Halyeygii Manchester United Ee Willie Morgan Oo Magacaabay Afarta Ciyaartoy Ee Uu Doonayo In Kooxdiisa Hore Iska Iibiso Bisha January | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(15-12-2018) Halyeygii Manchester United ee Willie Morgan ayaa aaminsan in tababaraha kooxdaas Jose Mourinho ay tahay inuu iibiyo afar ciyaartoy marka uu furmo suuqa iibka ciyaartoyga bisha January oo ay ka hadhsan tahay laba toddobaad oo kaliya.
Willie Morgan oo Manchester United u ciyaaray sannadihii u dhexeeyey 1968–1975 waxa uu sheegay inay tahay in Manchester United ay bisha Janaayo iibiso Antonio Valencia, Alexis Sanchez, Nemanja Matic iyo Paul Pogba, kuwaas oo uu tilmaamay in qaab ciyaareedkoodu aanu caawinaynin naadiga, isla markaana ay ka hooseeyaan qiimaynta ciyaartoyga ay tahay inaay xidhaan funaanadda Red Devils.
Morgann oo la hadlayey idaacadda Love Sport Radio, waxa uu si degdeg ah ugu soo jeediyey Jose Mourinho in isaga oo halbeeg ka dhiganaya ciyaartii Valencia ee Arbacadii uu go’aan ka gaadho xiddigaha sare ku xusan ee afarta ah oo aanay jirin wax intaa ka badan oo laga filan karo.
“Deg-degga ayay ku wanaagsan tahay. Miyuu sii haysan karaa Sanchez, Matic iyo Pogba?” Sidaas ayuu yidhi Willie Morgan, waxaanu sii raaciyey: “Isagu (Antonio Valencia) waa baal dambe oo fashilmay, kamana mid aha difaacyahannada ugu wanaagsan ee baalaha dunida. Marka uu garoonka ku jiro 100% ayuu wax walba kuu hurayaa laakiin xariif ma aha, lamana tebi doono. Aniga ayaa damaanad qaadaya taas.”
Morgan waxa uu u sheegay Mourinho in haddii uu doonayo inuu natiijo wanaagsan ka keeno ciyaarta Liverpool uu martida ugu noqonayo Anfield maalinta xadda inuu kaydka dhigo labada ciyaartoy ee Paul Pogba iyo Nemanja Matic, waxaanu yidhi: “Waxay ku xidhan tahay cidda uu ciyaarsiiyo, laakiin si daacad ah haddii aan u hadlo, waxa aan filayaa inuu natiijo ka keeni doono Liverpool. Ma garanayo sababta, laakiin waxa igu jira dareenkaas, waxaanay ku xidhnaan doontaa cidda uu ciyaarsiiyo.
“Haddii uu Matic iyo Pogba keeno khadka dhexe, mar kasta oo ay kubadda qabsadaan ciyaartu way istaagaysaa. Sidaa darteed waa inuu ciyaarsiiyo da’yarta orodka badan. Rashford waa ciyaartoy hxor ah oo meel kasta ka ciyaari kara, waana da’yar wanaagsan, waxayna ila tahay inuu natiijo ka keeni doono. Haddii Pogba iyo Matic ay ciyaaraan ma guuleysan doono.” Ayuu yidhi Morgan.